Shiikh C/qaadir oo lagu aasey Garowe 16 Feb 16, 2013 - 7:03:37 AM
Shiikh Cabdiqaadir oo lagu aasey Garowe ''Sawirro''bit.ly/11ML5Nn fb.me/ythsdIEZ— Garowe Online (@radiogarowe) February 16, 2013
Qabuuraha Galbeed ee magaalada Garowe ayaa galabta 16 February,2013 waxa lagu aasey Allaha u naxariistee Shiikh Cabdiqaadir
Nuur Faarax oo galabnimadii Jimcada lagu diley Garowe.
Wafdi ka socdey DF Somalia uu horkacayey Wasiirka Arrimaha Gudaha Cabdikariin Guuled ayna wehelinayeen wasiirka Maaliyada Qaranka iyo xildhibaano ka tirsan gollaha shacabka ayaa dhankooda Salaada Jinaasada ku tukaday.
Garoonka Olombikada Garowe oo ayaa dhowr kun oo qofi iskugu yimaadeen Salaada oo uu tujiyey Shiikh Maxamuud Xaaji Yuusuf ,waxana ka
dib goobta laga soo jeediyey khubaddo isugu jirey Taarikhdii Shiikha ,Canbaareynta cidii soo qorshaysey iyo weliba dardaaran iyo nasteexeen loo soo jeeshay kuwa weli ku jira falalka aragagixiso.
Shiikh Yuusuf Aadan oo 45 sanno ka badan ay saaxiibo dhow ahaayeen Shiikh Cabdiqaadir ayaa goobta isaga oo murugeysan ka so jeedshey taariikh nololeedkii Shiikha Alaha u naxariistee laga soo bilaabo xiligi
ay isbarteen Jaamacada Madiina ee dalka Sucuudiga 1964.
Wadaado ay ka mid yihiin Shiikh Bashiir Axmed Salaad gudoomiyaha Hayada Culimada Soomaliyeed ,ku xigeenkiisa Shiikh Nuur Baaruud ,Shiikh Daahir Aw-Cabdi Shiikh Axmed Cabdisamad iyo Shiikh Cabdinaasir ayaa si weyn u dhaleecey kooxda Al-shabaab ee ka danbeysey dilka Shiikha ,waxana
ay sheegeen in boqolal Shiikha Cilmigiia bartey ay joogaan.
‘’Wadadii Khawaarijta ayay hayaan ,maxkamadihii bay ku dhex milnaayeen waana in dhamaan la iska kaashadaa sidii la iskaga qaban lahaa’’ Ayuu yiri Shiikh Nuur Baaruud.
Wasiirka Arimaha Gudaha Somalia Cabdikariin Guuleed ayaa dhankiisa goobta ka soo jeediyey tacsi uu ka waday madaxweynaha iyo Raysal wasaaraha DF Somalia oo ku aadan dilka Marxuumka,isagoona raacshay in Puntland iska kaashadan doonaan la-dagaalanka kooxda.
Halkan ka Daawo: Qaybta 1-aad Sawiradda Aaska Shiikh Cabdiqaadir
Halkan ka Daawo: Qaybta 2-aad Sawiradda Aaska Shiikh Cabdiqaadir
Ugu danbeyntii ayaa hadalka waxa soo xirey Madaxweynaha Puntland oo ka tacsiyeeyey dhamaan cidii uu ka tagay Shiikhu geeridiisa naxdinta lahayd kadib.
‘’Xidig dhacay ayay la mid tahay geerida Shiikha ,waxaan ku kalsoonahayse in xidig kale noo soo baxayo ,meeshii ku haboonyed ayuu ku dhintey’’Ayuu yiri Madaxweynuhu oo raacshay hadalkiisa‘’Axmed Godane oo xukun doon ayaa diley Shiikh Cabdiqaadir ‘’.
Waxa uu soo jeedshay Madaxweynuhu dhalinyarada ku jirta falalka Al-shabaab weli inay ka soo baxaan oo ka soo laabtaan waxay wadaan islamarkaasina dib Bulshada ugu soo noqdaan.
Halkan ka dhageyso Dhamaan Codadkii laga jeedshay Aaska Shiikha